ဖြိုး အလ်ဝိုင်: လူ့အသတ်ကို သတ်၍ ဗုဒ္ဓဘာသာကို ပြန့်ပွါးအောင်ပြုလုပ်သည့်ကို ကျမ်းအရကော သမိုင်းအရ ထင်ရှားစွာ သိနိူင်ရန် ဖော်ပြလိုက်သည်
လူ့အသတ်ကို သတ်၍ ဗုဒ္ဓဘာသာကို ပြန့်ပွါးအောင်ပြုလုပ်သည့်ကို ကျမ်းအရကော သမိုင်းအရ ထင်ရှားစွာ သိနိူင်ရန် ဖော်ပြလိုက်သည်
လူအသက်သတ်၍ အပြစ်မရှိဆိုသော ဗုဒ္ဓစာပေ။
(အပါဏာတိပါတာ ဝေရာမဏိ သိက္ခာမဒံ သမာဓိယာမိ = လူအသက်သတ်ခြင်းတည်းဟူသော အလိမ်အညာအား အကျွန်ုပ်သည် ဝေးစွာ ရှောင်ကျဉ်ပါ၏ မြတ်စွာဘုရား )
ဤအကြောင်းတရားကား ဗုဒ္ဓဘာသာသည် ခြောက်ပြစ်ကင်း သဲလဲစင်ကဲ့သို့ သံကုန်ဟစ်နေသော ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များအတွက် အဖြေနှင့် အမှန်တရားကို ဖေါ်ထုတ်ခြင်းသက်သက်သာ ဖြစ်ပါသည်။ ယခုစာကား ဗုဒ္ဓဘာသာ လက်စွဲကျမ်း ( သာသနာရေးဦးစီးဌာန၊ သာသနာ ၂၅၃၇၊ ကောဇာ ၁၃၅၅၊ ခရစ်နှစ် ၁၉၉၃ နှစ်ထုတ်ဖြစ်ပါသည်၊ နှာ ၆၇-၆၈ ) မှ ဖြစ်ပါသည်……
ဒုဌဂါမဏိမင်းကြီးသည် အက္ခောဘိဏီ ၁-နှင့် သုညလေးဆယ့်နှစ်ရှိသော သင်္ချာသည် `` အက္ခောဘိဏီ´´ အရေအတွက် ဖြစ်၏။ ပါဠိအဘိဓါန်တ၌ကား ၀ါးအလုံး ၆၀-ကို တစ်စည်းစီ စည်း၍ ၀ါးအစည်း ၆၀-ပုံထားရာ၌ စစ်တပ် တစ်တပ်က နင်း၍ သွားရာ ၀ါးအားလုံး မြေမှုန့်ဖြစ်လောက်အောင် များသော စစ်တပ်ကို `` အက္ခောဘာဏီတပ်´´ ဟုဆို၏ (မဟာဝံသဋီကာ၊ သဒ္ဒနီတိကျမ်းတို့၌ အဓိပ္ပါယ် တမျိုး ဆိုကြသေး၏ )၊ နည်းတဲ့ စစ်တပ်အင်အား မဟုတ်ဘူးနော်….၀ါးအလုံး (၆၀)ကို တစ်စည်းစီပြီ ၀ါးအစည်းပေါင်း (၆၀) ကို တတ်နင်း၍ မြေမှုန့်ဖြစ်သော စစ်တပ်က အဘယ်မျှလောက် လူဦးရေ ရှိမယ်ဆိုတာ စာရေးသူ ခန့်မှန်းမိသလောက်ဆို လူဦးရေပေါင်း သန်းနှင့် ချီရမည်…(သိန်းနဲ့ ချီလောက်တော့ မကဘူး ဘာဖြစ်လို့လဲဆို ၀ါးအစည်း(၆၀)တောင် မြေမှန့်ဖြစ်အောင် တတ်နင်းနိူင်တဲ့ စစ်သည်ဆိုတော့ နည်းတဲ့အင်အားမဟုတ်တော့ဘူး)…..
ဒုဌဂါမဏီမင်းကြီးသည် ဤ မျှလောက် များပြားသော စစ်တပ်ကို နှိမ်နင်း၍ စစ်ပွဲမှာ စစ်ခင်းအောင်မြင်ခဲ့ပြီးနောက် ယင်းကဲ့သို့ သတ်ဖြတ်သေစေခဲ့ခြင်းအတွက် မိမိအား သက်သာရာရနိုင်ရန် အကြောင်း အခွင့်ကောင်း ရှိ၊ မရှိ ရဟန်းအနာ မထေရ်မြတ် ရှစ်ပါးတို့ထံ မေးမြန်း လျှောက်ထားခဲ့ရာ ရဟန်းအနာ ( ရဟန်းနာမထေရ်မြတ်ဆိုကတည်းက နည်းတဲ့ ရာထူးမဟုတ်ဘူးနော်..သိုင်းရွှီးဂိုဏ်းချုပ် ပြီးတဲ့နောက် သိုင်းရွှီးလက်ထောက်ခံဂိုဏ်းဆရာများ ) မထေရ်မြတ်ရှစ်ပါးတို့က သက်သာရာ ရနိုင်ကြောင်း အောက်ပါအတိုင်း မိန့်မြွတ်ဖြေကြားတော်မူခဲ့သည်……
(``မင်းမြတ်…. သင် မင်းမြတ်သည် အက္ခောဘိဏီ မကသော ကျည်းကုလားများကို သတ်ဖြတ်သေစေရာ၌ (သူတို့ကတောင် ကျည်းကုလားလို့တောင် ပြောလိုက်သေးတယ်….ဒီကတည်းက သိုင်းရွှီးဂိုဏ်းဝင်များဟာ လူအသားယောင် ခွဲခြားမူရှိသည်....သူတို့ လည်းမည်းတာပဲ မည်းမည်းချင်းအတူတူတောင် ကျည်းကုလားလို့ ထက်၍ သတ်မှတ် သည်မှာ အိန္ဒိယလူမျိုးကုလားတို့၏ ဓလေ့ထုံးစံပင် ဖြစ်သည်..ယခု ခေတ်တွေ တိုးတက်လာလို့ အိန္ဒိယမလေးတွေ ဖြူဖြူဖွေးဖွေးလေးတွေ တွေ့လာရတာပါ....ဒါပေမဲ့ ဂေါတာမမျိုးနွယ်သာလိကများကတော့ မည်းနေတုန်းပဲ…စိတ်ဓာတ်ကလည်း မည်း အသားအရည်ကလည်း မည်းဆိုတာ ဂေါတာမတို့ မျိုးနွယ်ကို ရည်ရွယ်ပြောဆိုကြတာ ဖြစ်မည်.. …)
သရဏဂုံ တည်သူ တစ်ယောက်နှင့် ငါးပါးသီလမြဲသူ တစ်ယောက် ပါဝင်သောကြောင့် တစ်ယောက်နှင့် တစ်ပိုင်းအတွက်သာ လူသတ်မှု အပြစ်ရှိသည်။ ကြွင်းသော မိစ္ဆာအယူရှိသူနှင့် သီလမရှိသူ ရန်သူအားလုံးတို့ကို သတ်မှု အပြစ်မျိုးလောက်သာ ရှိသည်ဟု မှတ်ယူသင့်၏….. သင်မင်းမြတ်၏ တိရိစ္ဆာန် သားသမင်များ နွားများနှင့် တူသော ရန်သူများနှင့် တကွ လူတစ်ယောက်နှင့် တပိုင်းတို့ကို သတ်မိသော အကုသိုလ်သည် မြတ်စွာဘုရားရှင်၏ သာသနာတော်မြတ် သုံးပါးတည်တံ့ပြန့်ပွား ထွန်းကားရေးအတွက် ရည်ရွည်သည်ဖြစ်သောကြောင့် သင်မင်းမြတ်အား နတ်ပြည်ရောက်ရန် အန္တရာယ်၊ မဂ်ဖိုလ်ရရန် အန္တရာယ် မဖြစ်နိုင်ပါ။(ဤသို့သော အချက်ကို ထောက်၍ ဗုဒ္ဓဘာသာပြန့်ပွားရေးကို လူသတ်နည်းဖြင့် ပယ်ရှင်းသည့်ကို တွေ့ရနိူင်သည်…ဗုဒ္ဓဘာသာ သာသနာကို လူသတ်၍ နယ်ချဲ့ ခဲ့သည်ကို ဤကျမ်းအရ ထင်ရှားစွာ သိနိူင်သည်) ပြီးခဲ့သည့် စစ်ပွဲများကို အကြောင်းပြု၍ နှလုံးမသာမယာခြင်း ဖြစ်နေလျှင် ယင်းကိုပယ်ဖျောက်လော့´´
ဟုရဟန္တာ မထေရ်မြတ်ရှစ်ပါးတို့က မိန့်မြွတ်ဖြေကြားတော်မူခဲ့ပါသည်.......
အထက်ပါ အကြောင်းအရာများကိုေ ထာက်၍ ခေတ်သမိုင်းကြောင်းကို ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင် ဗုဒ္ဓဘာသာ သာသနာသည် သွေးစွန်း၍ ဓါးမိုးပြီး နယ်ချဲ့ ခဲ့ကြောင်း ထင်ရှားစွာ သိမြင်နိူင်သည်….
(ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့သည် အစဉ်သဖြင့် ကြီးနိူင်ငယ်ညင်း မူဝါဒကို ယခုလက်ရှိပင် ကိုင်စွဲထားသည်မှာ မျက်မြင်ကိုယ်တွေ့ပင် ဖြစ်သည်...ကိုယ်ထက် အင်အားသာလျှင် ဖင်ကုန်းပြီး ဒူးထောက်သည်...)
ကိုယ့်ထက် အင်အားနည်းလျှင် လူစုဖွဲ့ ၍ အနိူင်ကျင့်သည်......
ဘာမှမရှိတဲ့သူများ အမေ၇ိကန်/အနောက်နိူင်ငံ သွားဖို့ သူတို့ကြိုးစား…
ဒီဘ၀မှတင် အစားချောင်ရုံ/ အနေချောင်ရုံ ကျေနပ်ပါပြီးဗျ…
ကန်တော့ဟေ့ ကန်တော့ဟေ့ သူတို့က သေနတ်တွေနဲ့ဟ …
သေနတ်မပါတဲ့သူတွေပဲ ငါတို့နိူင်တာဟ…. ကန်တော့ဟ
(စာရေးသူမှ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များအတွက် အကောင်းဆုံး အကြံပေးချင်တယ် ဘာမှ အဓိပ္ပါယ်မရှိတဲ့ ဘာသာတခုကို ကိုးကွယ်နေရတာထက် ဘာမှမကိုးကွယ်တာက ပိုပြီး ကောင်းပါတယ်...)